I-China Thin Polyimide yokugoba i-FPC kunye nabavelisi be-FR4 yokuqinisa kunye nabathengisi | Kangna
Uhlobo Material: polyimide
Min ubungakanani umngxuma: 0.20mm
Kugqityiwe ubukhulu bebhodi: 0.30mm
Umbala we-Solder mask: obomvu
Ixesha Lead: iintsuku ezili-10
I-FPC sisifinyezo sesekethe eguquguqukayo eshicilelweyo ukukhanya kwayo, ukutyeba okubhityileyo, ukugoba simahla nokusonga kunye nezinye iimpawu ezibalaseleyo ziyathandeka.
I-FPC iphuhliswa yi-United States ngexesha lenkqubo yeteknoloji yophuhliso lweteknoloji.
I-FPC iqulethe ifilimu encinci ye-polym ehambisa ubushushu eneepateni zokuhamba zesekethe ezigxunyekwe kuyo kwaye zibonelelwa ngesambatho esincinci sePolymer ukukhusela iisekethe zomqhubi. Itekhnoloji isetyenziselwe ukunxibelelanisa izixhobo ze-elektroniki ukusukela nge1950s kwenye indlela okanye enye. Yenye yeetekhnoloji ezibaluleke kakhulu zonxibelelwano ezisetyenziselwa ukwenziwa kweemveliso zekhompyutha eziphambili kakhulu namhlanje.
1. Inokugoba, inxeba kwaye isongwe ngokukhululekileyo, icwangciswe ngokungqinelana neemfuno zobume bomhlaba, kwaye ihanjiswe kwaye yandiswe ngokungacacanga kwindawo enamacala amathathu, ukuze kufezekiswe ukudityaniswa kwendibano yecandelo kunye nonxibelelwano lwentambo;
2. Ukusetyenziswa kwe-FPC kungawunciphisa kakhulu umthamo kunye nobunzima beemveliso ze-elektroniki, ukuziqhelanisa nokuphuhliswa kweemveliso zekhompyuter ukuya kubuninzi obuphezulu, i-miniaturization, ukuthembeka okuphezulu.
Ibhodi yesekethe ye-FPC ikwanazo neenzuzo zokuchithwa kobushushu kunye nokuqina, ukufakwa ngokulula kunye neendleko eziphantsi eziphantsi. Umdibaniso woyilo lwebhodi oluguquguqukayo nolungqongqo lwenza ukusilela okuncinci kwe-substrate eguqukayo kubungakanani bezinto ukuya kwinqanaba elithile.
I-FPC iya kuqhubeka nokwenza izinto ezintsha kwimiba emine kwixa elizayo, ngakumbi:
1. Ukutyeba. I-FPC kufuneka ibhetyebhetye kwaye icekeceke;
2. Ukusonga ukuxhathisa. Ukugoba luphawu lwe-FPC. Kwixesha elizayo, i-FPC kufuneka ibe bhetyebhetye ngakumbi, ngaphezulu kwamaxesha ayi-10,000. Ewe kunjalo, oku kufuna i-substrate engcono.
3. Ixabiso. Okwangoku, ixabiso le-FPC liphezulu kakhulu kune-PCB. Ukuba ixabiso le-FPC lehlile, intengiso iya kuba banzi kakhulu.
4. Inqanaba lobuchwepheshe. Ukuze kuhlangatyezwane neemfuno ezahlukeneyo, inkqubo ye-FPC kufuneka iphuculwe kwaye ubuncinci besithuba kunye nobubanzi bomgca / isithuba somgca kufuneka sihlangabezane neemfuno eziphezulu.
Egqithileyo 8.0W / mk ukuqhuba okuphezulu kobushushu kwi-MCPCB yetotshi yombane
Okulandelayo: Ulawulo lwe-6 lwe-impedance yolawulo oluqinileyo-lwebhodi ene-stiffener